Mụta Banyere Ndị Ọrụ Anyị Dị Ebube »Mahadum Hodges
Mmụta Kasị Elu kụziri Site na ndị ọkachamara gụrụ akwụkwọ
Hodges U Ngalaba & Ndị Ọrụ
Hodges U na-enye ụdị agụmakwụkwọ dị iche iche nke enweghị ike ịchọta ebe ọ bụla ọzọ ma ị na-enweta agụmakwụkwọ gị na kọleji, n'ịntanetị, ma ọ bụ n'ụdị agwakọtara. N'ihi gịnị? Ngalaba anyị, Ngalaba Adjunct, na Ndị Ọrụ nwere otu nzube - iji nyere gị aka ịga nke ọma! Na Hodges, anyị ghọtara ihe ịma aka nke ndị na-amụ ihe okenye nwere ọrụ na ọrụ ezinụlọ. Ọ bụ ya mere anyị ji mepee iji nye gị ngwa ọrụ ịkwesịrị iji nweta agụmakwụkwọ na ọrụ gị.
Ndị na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ ọ bụla n’ụlọ akwụkwọ anyị nyefere gị ọganiihu gị. Ha na-ewepụta oge iji soro gị na-enyere gị aka imeri nsogbu ọ bụla nwere ike ịbịara gị. Amụma emeghe ụzọ pụtara na ndị Deans anyị ọ bụla nwere ike ịnweta ya. Biko gbalịsie ike, ọ bụrụgodi naanị igosipụta onwe gị. Na Mahadum Hodges, ndị Deans anyị chọrọ ka ị nweta ebumnuche agụmakwụkwọ gị! Ka anyị nyere gị aka n'ụzọ.
Mụ na ndị otu ngalaba anyị, ị ga - ahụ ngalaba na ngalaba na - arụ ọrụ na - enye otu ụlọ akwụkwọ kọleji ị kwesiri. Obere klas anyị dị obere na-eme ka ọ dị mfe ịnata nlebara anya nke ndị mmadụ n'otu n'otu dị mkpa ka ị ruo ihe mgbaru ọsọ agụmakwụkwọ na ọrụ gị. Learningmụta bụ ihe rụzuru na ndụ anyị ma anyị nọ ebe a iji kwado gị ka mkpa ọ dị inwekwu ihe ọmụma na-eto. Na mgbakwunye, n'ihi na ndị otu ngalaba mahadum anyị nwere ahụmịhe ha na-akụzi, ị ga-amụta karịa tiori na ọtụtụ ihe ị mụtara nwere ike itinye n'ọrụ n'ọnọdụ gị ugbu a.
Ndị ọrụ anyị dị maka gị. Site na ndị na - ekele gị maka nnabata enyemaka ego na ndị ọrụ na - arụ ọrụ etiti - anyị ekpuchila gị. Ndị ọrụ anyị nọ ebe a iji nyere gị aka ịme ụzọ ọ bụla, ọbụlagodi gụsịrị akwụkwọ.
Nchịkọta Ọrụ Ndị Ọrụ